Siyaasni ADWUI bulluqaara; Miseensonni paarlaamaa OPDO fi ANDM paarlaamaa hin seennu jedhan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Siyaasni ADWUI bulluqaara; Miseensonni paarlaamaa OPDO fi ANDM paarlaamaa hin seennu jedhan
Siyaasni ADWUI bulluqaara; Miseensonni paarlaamaa OPDO fi ANDM paarlaamaa hin seennu jedhan
Miseensonni paarlaamaa kanniin OPDO fi ANDM irraa ta’an guyyaa har’aa marii hatattamaa geggeessaniiru. Itti bayiinsi marii isaaniis MM Haylamaaran Dassaalenyi gara paarlaamaatti haa dhufu isa jedhu. Miseensonni paarlaamaa kunniin hanga MM Hayalamaaram Dassaalenyi paarlaamaa biyyattii funduratti dhiyaatee Agaaziin naannolee keessa burraaqaa ummata akka ajjeesuu fi tasgabbii dhabsiisuuf eennu akka hayyame laate hanga ibsutti paarlaamaa seenanii hujii idilee kan hin eegalle ta’uu isaa ibsaniiru.
Seenaa Itoophiyaa yeroo dhiyee tankaarfiin kana fakkaatu fudhatamee hin beeku. Kuni kan addeessu siyaasni ADWUI sadarkaa diigamiinsaa irra gayuu isaati.
Miseensonni paarlaamaa kunniin murtee kana fakkaatu fudhachuun isaanii sirriidha. Murtee boonsaa fi gootummaati. Murtee aantummaa sabaati. Murtee yeroon gaafatuudha. Xumura Woyyaanee arguudhaaf ummanni Oromoo fi Amaaraa murtee akkanaa, qabsoo keessaa godhamu, deeggaruu qaba. Viva misensota paarlaamaa, isin waliin jirra, jechutu irraa eegama.
Gama biraatiin miseensonni koree hojii raawwachiiftuu ADWUI marii isaanii kaleessa addaan kutanii turan har’a itti fufanii jiru. Marii kanarrattis hoogganoonni gameeyyiin kana dura sooramaan koree hojii raawwachiifttuu gadi lakkisanii turan (Abaay Xahaayyee, Kumaa Dammaqsaa, Girmaa Birruu, Suyyum Masfiin, Addisuu Laggasaa kkf ta’uu isaatii) maarii irratti kan hirmaatan ta’uun isaa beekameera.
Previous articleWoyyaaneen tooftaa jijijjiirataa umrii akka dheereffattuuf hayyamamuu hin qabu
Next articleWoyyaaneen hoogganoota keenna irratti tankaarfii cimaa fudhachuuf deemtii Oromoon uf qopheessi